Taariikhda Tareenka Bursa Mudanya | RayHaber | raillynews
[20 / 02 / 2020] Shirkadaha metrooga ee Magaalooyinka Waaweyn ee Bandhiga Wershadaha Tareenka	26 Eskisehir
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaTaariikhda Wadada Tareenka ee Bursa Mudanya
11 / 01 / 2020 16 Bursa, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
bursa mudanya tareenka taariikhda
2016 waxaa lagu dhawaaqay Tareenka Xawaaraha Sare ee magaalada Bursa sanadka 2020-ka ayaana la bartilmaameedsaday. In kasta oo tareenka magaalada dib loo dhigay in muddo ah sababa la xiriira dayacaad la’aanta howlaha dhismaha, taariikhda tareenka ee Bursa waxaa ka buuxa dhacdooyin xiiso badan.
RAILWAY KA MUDANYA ilaa BURSA
Mudanya Bursa Railway, dhismaha oo bilaabmay 1875 oo safarkiisii ​​ugu horreeyay galay 1892, wuxuu ahaa nooc koofiyad u gaar ah oo koofiyad gaar ah oo dhererkiisu yahay 41 kiiloomitir aan xiriirna la lahayn khadka Anatolia. Dhismaha khadka ayaa laba jeer dib u dhigay sababo dhaqaale awgood, isku daygii saddexaadna waxaa dhammaystiray ganacsade reer Belgian ah, Georges Nagelmackers.
GAADIIDKA HUBINTA EASY
Fikradda ah in la dhiso wado tareen oo u dhaxaysa Mudanya iyo Bursa ayaa timid markii ugu horaysay 1867 sida laga soo xigtay ilo taariikhi ah. Mowqifkii Mudanya ee ganacsiga bari-galbeed iyo qarnigii 18aad, ganacsiga xariir Bursa, oo ku soo baxay wax soo saar tayo leh oo ka tagay tayo xariirkii Iran, raad weyn buu ku yeeshay. Intaa waxaa sii dheer, keenista alaabada la keenay Istanbul oo sidaas darteed qasriga loo mariyey Bursa waxay keentay baahida loo qabo qulqulka xawaaraha iyo rakhiiska ah. Waxa intaa u dheer oo dhan, kuwa yimid ilaha biyaha kulul ee Bursa ee Yurub iyo Istanbul waxay ahaayeen kuwo wax ku ool ah fikradda ah khadka tareenka.
Markii dhismaha qadka uu ku jiray ajandaha, mashruucii ugu horreeyay wuxuu ahaa wado tareen oo ka bilaabatay Mudanya una gudbay Bursa, Kütahya iyo Karahisar ilaa Konya. Dhismaha deked ku taal xeebta Mudanya sidoo kale mashruucan waxaa lagu daray.
Wadarta dhererka qadkaan waxaa loo go'aamiyey sida 576 kilomitir. Dhererka ayaa la mid ah gaadhi saacad ah oo 96 ah. Dhismaha, 360 kun oo 120 kun oo ku nool gobollada halka ay ka gudbayaan waxay noqon doonaan kuwo shaqeynaya isla markaana 240-ka haray ayaa la canshuuri doonaa oo wax ka geysanaya walaxda. Kiiloomitir 6 kun kiiloo mitir ayaa laga sameyn doonaa tareenka 3 million 456 kun kiiloo mitir ayaa loo qorsheeyay in ay ku kacdo. Dawladdu waxay bixin doontaa kunka kun ee xaddiga 384 ee xariiqan, dadka ku nool meelaha ay xaruntu ku dhaafi doonto waxay bixin doontaa lacagta 58 sannadkii ama waxay ka shaqeysaa dhismaha toddoba cisho sannadkii. Khadkan, kaas oo i xusuusinaya bukaanka Dumrul waalan, waa in ay qaadaan 88 kun tan oo badeeco ah ama alaab ah sannadkii si ay u helaan faa'iido.
JOOJINTA JOOJINTA, KA BEDDELAYO
Wadada khadka tareenka ee Bursa Mudanya, oo la bilaabay in la dhiso ka dib horumarinada qaar, ayaa waxaa loo go'aamiyay sida soo socota; Mudanya- Yörükali - Koru (Passage) - Acemler - Bursa (Merinos sugitaanka) - Bursa
Dhibaatooyinka dhaqaale ee soo food saaray intii lagu gudajiray dhismaha khadka, howsha ayaa labo jeer istaagtay. Dhanka kale, laba taallo taariikhi ah ayaa laga helay wadada Mudanya ilaa khadka waxaana taalladaasi loo diray Istanbul.
BELGIUM ENTREPRENEURS BUUXAN
Ku dhawaad ​​labaatan sano kadib markii qoditaankii ugu horreeyay ee khadka la galay, waxaa heshiis la galay ganacsadaha reer Belgium Georges Nagelmackers. Heshiiska wax-ka-dhimista ayaa la saxeexay shirkadda Nagelmackers ', ka dib markii xoogaa dakhli ah oo laga helo qofkii rakaab ah oo la wadaago gobolka ay sidoo kale bixin doonto 40 kun oo rodol oo hore loogu shubayo khasnadda Ottoman.
Ugu dambayntiina, Nagelmeckers, oo ah ganacsade saddexaad ee safka, ayaa dhammaystiray aasaaska Shirkadda Mudanya - Shirkadda Waddooyinka Tareenka ee Bursa 10 Sebtember 1891. Qaybaha burburay ee tareenka, oo sanado badan shaqeynayey, waa la dayactirey. Qiyaastii 1700 shaqaale ah ayaa ka shaqeeyey hawsha dhameystirka.
KU SOO DHOWOW
Khadkan waxaa la furay 16kii Juun 1892. Shan Baabuur oo ay wateen laba tareen oo ka socdaya Saldhigga Mudanya oo wata calamado markay ahayd 08.20 ayaa gaadhay saldhigga Bursa oo lagu qurxiyo ubaxyo iyo buufinno markay ahayd 10.30. Tareenka waxaa salaamay gudoomiyaha Bursa Munir Pasha iyo dowlado fara badan iyo askar sidoo kale Mızıka Milatariga ah wuxuu ku ciyaaraayey Hamidiye Anthem.
DADKA SADDEXAAD AH
Wadada tareenka, oo ku xirneyd Tareenka Militariga iyo Maamulka Dekadaha intii lagu jiray Dagaalkii Koowaad, ayaa sidoo kale askarta Gariiga ah ku qaatey qiimo aad u sarreeya intii lagu gudajiray hubkii. Khadkan, oo ku kasbaday lacag aad u badan safarka askarta, ayaa la weydiistay inay iibiso shirkada howl galka kadib aasaaskii jamhuuriyada. Shirkadda ayaa khadka ka baxday 1 markii ay iibin weyday. ganacsi line ay la ka dib markii Republic of Turkey ayaa isku dayaya in ay ku xidhmaan line ee Anatolia. Khadkan, oo aan bixin soo-celinta dhaqaalaha ee la filay, ayaa la joojiyay Agoosto 1931, 18. Line, July 1948, 10 ee Grand National Assembly ee Turkey kararınca gebi ahaanba xiran.
Intii lagu gudajiray dhismaha iyo howlgalka, xirmooyinka tareenka Mudanya Bursa, oo soo maray xilli aad u adag, ayaa maanta gabi ahaanba laga saaray. Dhismooyinka la dhisay muddadii khadka waxaa loo istcimaalay hoteello, makhaayado iyo tas-hiilaad bulsheed.
(Warbixintaani waxay salka ku haysaa buugga cinwaankiisu yahay "Mudanya - Dhismaha Waddada Tareenka Bursa iyo Hawlgalka", oo uu qorey Mustafa Yazıcı, oo lagu abaalmariyey abaalmarinta Cilmi-baarista ee Yılmaz Akkılıç ee Bursa laguna daabacay Degmadda Nilüfer.)
BURSA MUDANYA TRAIN
Yusuf Sünbül: Merinos-Mudanya Safarka Tareenka Taariikhda
Maanta taariikhda: 1 Juun 1931 waa tareenka Mudanya-Bursa taariikhda iyo sharciga 1815 ...
Tareenka Taariikhda Mudanya waxaa loo keenay Bursa si loo muujiyo
Maanta taariikhda: Janaayo 1874 Mudanya
Mudanya Bursa Bandhiga Tareenka
Maanta taariikhda: 17 Juun 1892 Mudanya-Boosta ayaa la furay.
Maanta oo Taariikh ah: 10kii Luulyo 1953 khadka Bursa-Mudanya ciriiri (42 km) oo sharciga la tiiriyay 6135…
Mudanya Bursa Bandhiga Tareenka Sii Socda (Warbixinta Gaarka ah)
Magaalada Boosaaso waxay ku taallaa dekedda Ro Ro ee Mudanya Ketendere
Wasaaraddu waxay ku wareejisay Mudanya Pier oo ku taal Bursa Metropolitan
Maanta ee Taariikhda: 10 July 1953 Khadadka Ber-Mudanya ...
Dekedda Mudanya ee magaalada caasimadda
Shirkadda Tareenka Mudanya Bursa
Wadada tareenka Mudanya Bursa
Hawlaha Gawaarida Gawaarida Wadooyinka Russia ayaa sii socota